जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको साँवा-ब्याज नेपाल वायुसेवा निगमले तिर्न नसक्ने ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको साँवा-ब्याज नेपाल वायुसेवा निगमले तिर्न नसक्ने !
प्रकाशित मिति: १ बैशाख २०७६, आईतवार
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको साँवा–ब्याजबापत बुझाउनुपर्ने चैतको किस्ता पनि तिर्न नसक्ने भएको छ। निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट दुई न्यारो बडी र दुई वाइड बडी जहाज किन्दा लिएको ऋण ३७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ।
ऋणको साँवा–ब्याजको किस्ता १५ वर्षसम्म तीन–तीन महिनामा बुझाउने सर्त छ। निगमले दुई वाइड बडीको ८० करोड ४२ लाख र दुई न्यारो बडीको ३३ करोड नौ लाख रुपैयाँ गरी एक किस्तामा एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। निगमले पुसको किस्ता पनि पूरै तिरेको छैन। निगमका सहप्रवक्ता नवराज कोइरालाका अनुसार एक अर्ब १३ करोडमध्ये करिब ४४ करोड रुपैयाँ पुसमा तिरेको थियो। यसैगरी, चैतको किस्ता पनि निगमले पूरै नतिरेर जति आम्दानी भएको छ, त्यत्तिमात्रै तिर्ने तयारी गरेको छ।
‘हाम्रो योजना त पूरै तिर्ने हो,’ सहप्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘पूरै किस्ता तिर्न पुग्ने गरी आम्दानी नभएको हुन सक्छ।’ उनका अनुसार पुगे पूरै, नपुगे जति पुग्छ, त्यत्ति तिर्ने योजना छ।
निगम एक अधिकारीका अनुसार निगमले चैतको किस्ताबापत पनि अघिल्लोमा जस्तै ४० देखि ५० करोड रुपैयाँमात्रै बुझाउने तयारी गरेको छ। यो भनेको तिर्नुपर्ने किस्ताको आधाभन्दा पनि कम रकम हो। किस्ता तिर्न नसकेपछि निगमले सरकारसँग पाँच अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। निगम धराशयी बन्दै गएको भन्दै यसअघि २० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारसँग अनुरोध गरिएको थियो।
सरकारले २० अर्ब दिन अस्वीकार गरेपछि निगमले पाँच अर्ब भए पनि दिन अनुरोध गरेको छ। सोही पाँच अर्ब सरकारले दिएपछि जहाजको किस्ता तिर्ने तयारीमा निगम छ। सहप्रवक्ता कोइरालाका अनुसार यस विषयमा सरकारसँग वार्ता भइरहेको छ। सरकारसँगै ऋणदातासँग पनि छलफल भइरहेको निगमले बताएको समाचार नागरिकमा छ ।
किन तिर्न सकेन ?
निगमसँग रहेका अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने दुई न्यारो बडी, दुई वाइड बडी र एक बोइङ जहाज पूर्ण रुपमा सञ्चालन नहुँदा ऋणको किस्ता तिर्न नसकेको हो। पाँचवटा जहाजबाट निगमले दैनिक ७० घन्टा उडान गराउन सक्छ। तर, ती जहाजलाई दैनिक ३४ घन्टा मात्रै उडाइरहेको छ। निगमले क्षमताअनुसार जहाज नउडाउँदा आम्दानी कम छ।
सयौँ बालबालिका खुला आकाशमुनि पढ्दै
गौशाला, ६ जेठ - महोत्तरी जिल्लाको मधवा गाउँका सयौँ बालबालिका प्रचण्ड गर्मी र हावाहुरीको सामना गर्दै खुला […]
प्रदेश नं ३ मन्त्रीपरिषद् बैठक : यस्ता छन् निर्णयहरु
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यले तलब तथा अन्य सेवासुविधा लिन विधेयक […]
अष्ट्रेलिया पीआरको लागि यस्तो आउँदैछ नयाँ नियम
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलिया सरकारले पीआरको लागि नयाँ नियम ल्याउने भएको छ । नयाँ नियम अनुसार पीआरकोको लागि अब […]
एक बर्षमा सवा पाँच लाख भन्दा बढी नेपाली बिदेशीए
साउन १५, काठमाडौँ – देशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुदा वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुकमा जाने नेपालीको […]
पेट्रोलियम पाइपलाइन वैशाखदेखि सञ्चालनमा आउने, यस्तो छ हालसम्मको प्रगति
वीरगञ्ज । दक्षिण एशियाकै पहिलो क्रस बोर्डर परियोजनाका रुपमा रहेको मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम […]
सकारात्मक परिवर्तनका लागि मन छुने लाइनहरु !
असनेपालन्युज । सकारात्मक परिवर्तनका लागि मन छुने लाइनहरु । अरुका लागि देखाउंन मात्र होइन आत्म […]